Post Date 2021-01-20 19:08:31
काठमाडौं । निर्माण सामाग्री कम्पनीको रुपमा रहेको गोर्खा इको प्यानलले सुदुरपश्चिम क्षेत्रका इन्जिनियरहरुलाई एकदिने जानकारीमुलक तालिम दिएको छ । सुदुरपश्चिमको पहाडी जिल्लाको रुपमा रहेको डडेलढुरा जिल्लाका झण्डै दुई दर्जन इन्जिनियरहरुलाई आफनो प्रोडक्टकाबारेमा जानकारीमुलक तालिम दिएको हो ।
हलुका र छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माण सामाग्रीको रुपमा रहेको गोर्खा इको प्यानलप्रति स्थानीयको आकर्षण रहेको र तर त्यसबारे विस्तृत जानकारीको अभाब भएकाले त्यसैलाई मध्यनजर गरी तालिम सञ्चालन गरेको गोर्खा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इन्जिनियर सुरेश कवांले जानकारी गराए । गोर्खा इको प्यानल अन्तर्गतको डडेलढुराको डिलर प्रेरणा कन्ष्ट्रक्सनले तालिमको आयोजना गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
गोर्खा इको प्यानल भित्री तथा वाहिरी पार्टेशन वालको रुपमा इटाको विकल्पमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री हो । यो हलुका हुनुका साथै यसबाट छिटो निर्माण पनि सम्भव हुन्छ । कारखानामा पहिला नै तयार पारिएको सामान फिल्डमा लगेर जोडदा मात्रै पुग्ने भएकाले यसबाट तीव्र निर्माण सम्भब हुन गएको हो ।
तालिममा सहभागी इन्जिनियरहरुलाई गोर्खा इको प्यानल के हो ? यो कहाँंकहाँं प्रयोग गर्न सकिन्छ ? कसरी प्रयोग गर्ने? यसले कसरी तीव्र निर्माण सम्भब भयो भन्नेबारेमा जानकारी दिइएको थियो । इन्जिनियरहरुमार्फत् घर, भबन निर्माण गर्न चाहने ग्राहकसम्म पुग्न सहज हुने भएकाले इन्जिनियर लक्षित तालिम गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
गोर्खा इको प्यानल हलुका हुनाले पहाडी जिलाहरुमा ढुवानीमा सहज हुनेलगायतका कारण ती क्षेत्रहरुमा इको प्यानलको लोकप्रियता वढ्दो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । पछिल्लो समय सुदुरपश्चिमको मुख्य सहर धनगढीमा प्रख्याति पाएको यो कम्पनीका निर्माण सामाग्री आसपासका पहाडी जिल्लाहरुमा पनि लोकप्रिय हुन पुगेको कम्पनीको दावी छ । यसअघि लकडाउनको अवधिमा धनगढी अस्पतालमा गोर्खा इको प्यानलकै प्रयोगबाट ५० वेडको आइसोलेशन वार्ड बनाइएको थियो । अहिले पनि उक्त क्षेत्रमा गोर्खा इको प्यानलको प्रयोगबाट गाउँपालिका, नगरपालिकालगायतका कार्यालयहरु बनाउने क्रम तीव्र रहेको जनाइएको छ ।
गोर्खा इको प्यानल अन्तर्गतको डडेलढुराको डिलर प्रेरणा कन्ष्ट्रक्सनका प्रोपाइटरद्धय बासुदेव जोशी, हरि उप्रेतीले तालिमपछि सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा कम्पनीको प्रोडक्टको प्रयोगमा व्यापकता आउने विश्वास व्यक्त गरे । यस्ता तालिम पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका इन्जिनियरहरुलाई दिने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।...